China Fashoni T-Shirt / SX-2262 fekitori nevatengesi | Xiyingying
Mufashoni T-Shirt / SX-2262
Ruvara: Lt. grey melange
Micheka Nyaya: 100% donje rakasvuuka rimwe juzi, 150gsm
Slub donje ndeimwe yenyaya dzinoverengeka dzekuruka machira emachira ekotoni. Mucheka uyu unogara uchidhonza uye kunhonga shinda kuti uite slub-senge dhizaini maitiro. Iko kusarudzika kwemucheka werineni wepanyama kune kufema kuri nani uye kuita kwekutora ziya ziya kupfuura zvakajairika micheka yedonje. Iyo sarudzo iri nani yezhizha t-shirts. Shubhu yekotoni ine hunhu husingawanikwe mumachira akajairika ekotoni, senge kupfava, kukwirira kwemhepo, kutambanudza kuramba, uye kunyorova kwakanyanya uye zvichingodaro.
Rutivi rwemberi nemaoko anotora michina yekudhinda yepamberi. Mushure mekudzokorora kuwacha uye kuongorora, iyo pateni haina kupera uye inochengetedza yakanaka kubata, iyo inowedzera kune yakazara fashoni.
Cuffs yekumisikidza shandisa yakakwana yakapetwa kaviri kuti ipe yemhando yepamusoro cuffs, uye nekuita zviitiko zvive zvakasununguka uye zvemahara.
Hem rinosonwa nemazvo, uye hunyanzvi hwekugadzira hunovimbisa kuti harizowira pamutsetse nekushandura chimiro, uye rinogona kusimba uye kuwachika.
Iko kusarudzika kwakasarudzika kunokwana mapendekete uye inosimbisa mitsara yemapfudzi, ichivaita vakasununguka uye vasina kusimba.
T-shatindeimwe yehembe dzevanhu dzavanoda muchirimo nemuzhizha, kunyanya muzuva rinopisa uye rinopisa zvisingaite. Iine ayo echisikigo, akasununguka, uye ane chiremerera mabhenefiti, t-shati inova yenguva yekupfeka vanhu vanofarira kupfeka. Vanhu vanowanzo pfeka bhurugwa kana hembe yepasi nehembe pfupi pfupi kana hembe yeHong Kong munzvimbo dzekushamwaridzana, ikozvino t-shati iri kuitsiva zvishoma nezvishoma.
Kambani yedu ine anopfuura 1000 mativi metres eakazvitsaurira ekuratidzira horo, yakakamurwa kuita ina dzimba dzekuratidzira, vakomana, vasikana, kupfeka kwevarume, mayunifomu echikoro mana ekuratidzira dzimba, yekuratidzira horo chigadzirwa zvigadzirwa zvimiro zvakasiyana, timu yebudiriro yekambani gore rega rega maererano iyo tsika uye mutengi inoda kugadzira zvigadzirwa zvitsva, gamuchira vatengi vatsva nevakuru kuti vashanyire nhungamiro, isu tichava sarudzo yako yepamusoro uyezve wako waunovimba naye.
Pashure: T-shati yemukomana GR-554
Zvadaro: Mabhurukwa emukomana D921207
Vakomana Camo Tshirt
Vakomana Yakareba Sleeve Tshirt
Vakomana Sports Tshirt
Vakomana Stylish Tshirt
Vakomana Zhizha Tshirt
Vasikana Mitambo Tshirt
T-shati yemukomana FM-29677
Hoodie yemukomana FK20-07
Hoodie yemukomana FM-1329
Bhurugwa refu remukomana SH-955
Remukomana Laser kubaya uye kudziyisa bhachi / D ...
T-shati yemukomana uye zvikabudura SH-684